IGenesis 31 (Xhosa)České uživatelské rozhraní
1 Ke kaloku waweva amazwi oonyanaoonyana bakaLabhan, besithi, UYakobiUYakobi uzithabathile zonke izinto abenazo ubawo; ubenze ngezinto zikabawo obu butyebi bakhe bonke.
2 Wabubona uYakobiuYakobi ubusoubuso bukaLabhan, nabo bungenjengezolo nezolo elinye kuye.
3 UYehova wathi kuYakobi, BuyelaBuyela ezweni likayihlo, kwelokuzalwa kwakho; ndoba nawe.
4 UYakobiUYakobi wathumela, wabiza uRakeliuRakeli noLeya, ukuba beze endle empahleni yakhe emfutshane.
5 Wathi kubo, Ndiyabubona ubusoubuso bukayihlo, ukuba abunjengezolo nezolo elinye kum; ke uThixouThixo kabawo ubenam.
7 ke uyihlo undidephisele, wawuguqula umvuzo wam kalishumi; kodwa uThixouThixo akamvumelanga ukuba andenze into embi.
8 Xa athe, Enala yoba ngumvuzo wakho isuke yonke impahla emfutshane yazalayazala enala; xa athe, Enemizila yoba ngumvuzo wakho, isuke yonke impahla emfutshane yazalayazala enemizila.
9 Wayihlutha uThixouThixo imfuyoimfuyo kayihlo, wandinika.
10 Kwathi, ngexesha lokuphathana kwempahla emfutshane, ndawaphakamisa amehloamehlo am, ndabona ephupheni, nanzo iinkunzi ezikhwelayo empahleni emfutshane zinemizila, zinala, zinomchokose.
12 Sathi, Khawuphakamise amehloamehlo akho, ubone; zonke iinkunzi ezikhwelayo empahleni emfutshane zinemizila, zinala, zinomchokose; kuba ndizibonile zonke izinto azenzayo uLabhan kuwe.
14 Baphendula uRakeliuRakeli noLeya, bathi kuye, Sisenasabelo nalifa lini na endlwini kabawo?
16 Ngoko kuze bonke ubutyebiubutyebi abuhluthileyo uThixouThixo kubawo, bube bobethu, noboonyana bethu, kaloku ke konke akuthethileyo uThixouThixo kuwe kwenze.
17 Wesuka uYakobiuYakobi wabakhwelisa oonyanaoonyana bakhe, nabafazi bakhe, ezinkameleni.
19 ULabhan ubeye kucheba impahla yakhe emfutshane; uRakeliuRakeli wayiba imilonde-khaya ebiyekayise.
20 UYakobiUYakobi wamlalanisa uLabhan umAram, ekubeni engamxelelanga ukuba uyabaleka.
21 Wabaleke ke, yena nako konke abenako; wesuka, wawuwela uMlambouMlambo, wabubhekisa ubusoubuso bakhe entabeni yaseGiliyadi.
22 Waxelelwa uLabhan ngomhla wesithathu ukuba uYakobiuYakobi ubalekile.
24 WezaWeza uThixouThixo kuLabhan umAram ephupheni ebusuku, wathi kuye, Zilumkele, ungathethi nto kuYakobi, nokuba yelungileyo nokuba yembi.
25 ULabhan wafika kuYakobi. Ke kaloku uYakobiuYakobi ubeyigxumekile intenteintente yakhe entabeni; uLabhan nabazalwana bakhe bagxumeka entabeni yaseGiliyadi.
26 Wathi uLabhan kuYakobi, Wenza ntoni na ukundilalanisa, uziqhube iintombiiintombi zam njengabathinjwe ngekrele?
28 Yini na ukuba ungandivumeli ndibange oonyanaoonyana bam neentombi zam? Kaloku wenze ngobudenge.
29 Kusemandleni esandla sam ukunenza ububiububi; ke uThixouThixo kayihlo uthetheuthethe nam phezolo, esithi, Zilumkele, ungathethi nto noYakobi, nokuba yelungileyo nokuba yembi.
30 Ngoku umkileyo nje, ngokuba walangazelela kakhulu indluindlu kayihlo, uzibeleni na zona izithixoizithixo zam?
31 WaphendulaWaphendula uYakobiuYakobi wathi kuLabhan, Bendisoyika, kuba bendisithi, Hleze uzixhakamfule kum iintombiiintombi zakho.
32 Osukuba uzifumana kuye izithixoizithixo zakho, makangadli bomi. Phambi kwabazalwana bethu fanisa into yakho enam, uyithabathe. Wayengazi uYakobiuYakobi ukuba uRakeliuRakeli uzibile.
34 Ke kaloku uRakeliuRakeli ebeyithabathile imilonde-khaya, wayifaka phakathi kwesali yenkamela, wahlala phezu kwayo. ULabhan wayiphuthaphutha yonke intenteintente, akayifumana.
35 Wathi kuyise, Mawungabi namsindo, nkosinkosi yam, kuba ndingenako ukusuka phambi kwakho, ngokuba ndihleli phezu kwengca. Wagquthagqutha, akayifumana imilonde-khaya.
36 Wavutha umsindo kaYakobi, wabambana noLabhan. WaphendulaWaphendula uYakobiuYakobi, wathi kuLabhan, Luyintoni na ukreqo lwam, siyintoni na isonoisono sam, ukuba undisukele ngokushushu nje?
39 Into eqwengiweyo andiyizisanga kuwe, ndayimisela ngokwam; wayibiza esandleni sam nokuba ibiweibiwe emini, nokuba ibiweibiwe ebusuku.
42 Koko uThixouThixo kabawo, uThixouThixo ka-Abrahamka-Abraham, Ohlonelwa nguIsake, waba nam, inene unge undindulule ndilambatha ngoku. uThixouThixo uzibonile iintsizi zam nokuxelenga kwezandla zam, wakohlwaya phezolo.
43 ULabhan waphendulawaphendula wathi kuYakobi, IintombiIintombi ziintombi zam, oonyanaoonyana ngoonyana bam, impahla emfutshane yimpahla yam, neento zonke ozibonayo zezam. Ndinakwenza ntoni na namhla ezintombini zam ezi, nakoonyana azo ezibazeleyo?
45 UYakobiUYakobi wathabatha ilityeilitye, waliphakamisa lasisimiso.
46 Wathi uYakobiuYakobi kubazalwana bakhe, Cholani amatyeamatye. Bathabatha amatyeamatye, benza imfumbaimfumba, badla khona phezu kwaloo mfumba.
47 Wathi ukuyibiza uLabhan yiYegarsahaduta, uYakobiuYakobi wathi ukuyibiza yiGaledi.
48 Wathi uLabhan, Le mfumba ilingqina phakathi kwam nawe namhla, ngenxa yoko yathiywa igamaigama eliyiGaledi;
50 ukuba uthe wazicinezela iintombiiintombi zam, nokuba uthe wazeka abafaziabafazi phezu kweentombi zam, akukho bani unathi. Khangela, uThixouThixo ulingqina phakathi kwam nawe.
51 ULabhan wathi kuYakobi, YabonaYabona le mfumba, YabonaYabona esi simiso ndisiphakamisileyo phakathi kwam nawe;
52 ingqina yile mfumba, ingqina sesi simiso, ukuba andiyi kugqitha mna kule mfumba ndiye kuwe, ukuba akuyi kugqitha wena kule mfumba nakwesi simiso uze kum, senzane ububiububi.
53 UThixoUThixo ka-Abrahamka-Abraham, UThixoUThixo kaNahore, UThixoUThixo woyise wabo, makagwebe phakathi kwethu. UYakobiUYakobi wafungawafunga Ohlomelwa nguyise uIsakeuIsake.
54 UYakobiUYakobi wabingelela umbingelelo entabeni apho, wabiza abazalwana bakhe, ukuba badle isonkaisonka. Badla ke isonkaisonka, balala entabeni apho.
55 Wavuka uLabhan kusasakusasa, wabanga oonyanaoonyana bakhe, neentombi zakhe, wabasikelela; wemka ke uLabhan, wabuyela ekhayeni lakhe.
Exploring the Meaning of IGenesis 31